Fialan-tsasatra Amin'ny Fitondrana Vohoka - Votresalaire.org/Madagascar
Accueil Droit du Travail Maternité et Travail Fitondrana Vohoka sy Asa
Fialan-tsasatra amin'ny fitondrana vohoka
Ny mpiasa vehivavy dia manana zò 14 herinandro (98 andro) ho fialan-tsasatra amin'ny fitondrana vohoka ary mandray karama feno. Ny fialan-tsasatra noho ny fitondrana vohoka dia afaka hitarina telo (3) herinandro amboniny raha sendra faharariana mifandraika amin'ny vohoka na fiterahana (And. 97). 8 herinandro ho fialan-tsasatra noho ny fitondrana vohoka no homena ny vehivavy aorin'ny fiterahany. (And.97, Lalàna momba ny Asa)
Ny fialan-tsasatra amin'ny fitondrana vohoka dia homena miaraka amin'ny karama feno. 50 % n'ny karama dia haloan'ny mpampiasa ary ny 50 % sisa dia harotsakin'ny Tahirim-pirenena momba ny fiahiana sosialy na CNaPS. (And. 97, Lalàna momba ny Asa; And. 158, Lalàna momba ny Fiahina Sosialy)
Fitsaboana ara-pahasalamana maimaim-poana
Ny mpiasa vehivavy manana fiantohana dia mahazo famerenam-bola amin'ny fandaniana mikasika ny fitsaboana ara-pahasalamana mandritra ny fitondrana vohoka sy eo am-piterahana, hatramin'ny 5 000 ariary
Fitsipika mikasina ny fitondrana vohoka sy ny asa
Fiarovana Manoloana Ireo Fandroahana Fihatoana Fohy Fampinonoana Ho An'ny Reny Miasa Andraikitra Ara-pianakaviana Asa sy Aretina Aro Loza Mikasika ny Fiasana Conventions collectives - base de données
Citer cette page © WageIndicator 2017 - Votresalaire.org/Madagascar - Fitondrana Vohoka sy Asa